भोलिदेखि ओसारपसार र ढुवानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध – Khabar PatrikaNp
भोलिदेखि ओसारपसार र ढुवानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध
नवलपरासी । कोभिड १९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नवलपरासी(बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मा केराउ, छोहडा तथा मरिचको ओसारपसार र ढुवानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईएको छ ।जिल्लाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रबाट यस्ता वस्तुको अवैध ओसारपसार र चोरी निकासी बढेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको आज बसेको बैठकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
यहाँ रातको नौ बजेपछि जिल्लामा हिँडडुल गर्न रोक लगाईएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज जारी गरेको सूचना अनुसार अव रातीको नौबजेपछि अत्यावश्यक काम परेर बाहिर निस्कनु परेमा प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाव सङ्कलन गरिएका व्यक्तिलाई अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्न पनि आग्रह गरेको छ । त्यसरी बस्न अटेरी गर्ने व्यक्तिलाई निगरानी गरी कारवाही गरीने कार्यालयले जनाएको छ ।
स्वाव सङ्कलन गरिएका व्यक्ति जथाभावि हिँडडुल गर्दा समुदायमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिनुका साथै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्मा चुनौती थपिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले बताए । स्वास्थ्य कार्यालय वा स्थानीय तहबाट स्वाव सङ्कलन गरिएका व्यक्तिहरुको विवरण प्रकाशन हुनेछ ।
जिल्लामा पछिल्लो समय कोभिड १९ को सङ्क्रमण समुदायस्तरमै फैलिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न निकायका कर्मचारी तथा सर्वसाधारण गरी जिल्लामा १७८ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कोभिड १९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पश्चिम नवलपरासीमा साउन ३१ गते राती १२ बजेदेखि भदौ १० गते राती १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
Prevहरिवंश आचार्यले फेसबुकमा यस्तो लेख्नु भएको छ कुलमान घिसिङको बारेमा
Nextपोखरा,कास्कीका जारी निषेधाज्ञाको निर्णयमा सामान्य हेरफेर
आमा बन्दै श्वेता खड्का…!
दु:खद खबर : खर ‘का’ट्न भी’रमा गएका चार म’हिला सहित दुई जना पु’रुषको ‘ल’डे’ र ज्या’न ग’यो…
फेला पर्यो जे माग्यो तेहि पूरा हुने मन्दिर ! यसरी निस्किन्छ अनौठो नाग देवता……..! [भिडियो सहित]